ရွှေဥသြ: မြူးနစ်ရဲ့ထာဝရ နှင်းဆီဖြူများ
မနေ့ညနေခင်းနှောင်းပိုင်းတုံးက ကျနော်နှင်းဆီဖြူ တပွင့်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ လူတွေကပြော နေကြ တယ်၊ နှင်းဆီဖြူတွေဆိုတာ သေခြင်းတရားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရာပါတဲ့၊ တကယ်တော့ဗျာ၊ သေခြင်းတရားရယ်၊
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ်၊ နုပျိုမှုဆိုတာတွေရယ်ဟာ တခုတည်းပါ၊ သေခြင်း တရားဆိုတာက ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုထက်၊ အမြဲတန်းရှင်းလင်းတောက်ပနေတဲ့သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အရာမို့လား၊ ဆိုတော့ နှင်းဆီဖြူဆိုတာ သူရဲ့သင်းရနံ့တွေနဲ့၊ နူးညံ့အပြစ်ကင်း ဖြူစင်မှုတွေနဲ့ ထာဝရနုပျိုနေမှုကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်နေတယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်က အက်စစ်မိုးမှုန်တွေကျနော်တို့ဘ၀တွေကို မတိုက် စားခင် ကိုခင်ဝမ်းရဲ့နှင်းဆီဖြူရဲ့ အဝေးကလူတယောက်သီချင်းကို ညလုံးပေါက်ဂစ်တာဝိုင်း တွေနဲ့ နိုးထနေတဲ့သမိုင်းဆောင်တွေမှာ၊ ကွဲရှခံစားခဲ့ဘူးကြပါတယ်၊ အနုပညာတွေနဲ့ ရှင်သန် ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေဟာ အကုသိုလ်တွေနည်းသလို၊ မိတ်ဆွေစစ်စစ်တွေနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေ ကလည်း ဆွတ်ပျံ့ဘွယ်အောက်မေ့နေဆဲမို့ ပြည်ပမှာမြင်ကွင်းတွေကိုအာရုံနှောက်လာတဲ့အခါ၊ တခါတုံးက ဆိုဗီယက်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်မှာ ပြိုကွဲသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီက ပြည်သူ တွေ ဖန်ဆင်းထားတဲ့အနုပညာသစ်တွေ၊ တေးဂီတသစ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးနောက်ခံစာအုပ်တွေ၊ သူတို့ ဘ၀ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေ၊ စစ်အတွင်းကဂျာမဏီမိန်းမတွေအပေါ် ရက်ရက်စက်စက် ပြုကျင့်ခဲ့ တဲ့ရုရှားလူမျိုးတွေရဲ့စရိုက်တွေအပေါ် တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ ပေးစာတွေ၊ စစ်ရှုံး ဂျာမဏီရဲ့ လှမ်းခဲ့ရတဲ့ခရီးတွေ၊ ဖတ်ကြည့်ခံစားလိုစိတ်တွေ ချဉ်ခြင်းတတ်နေခဲ့ပါတယ်၊ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စာ အုပ်လေး(၂) အုပ်ကို သွားဖတ်ဖြစ်တယ်။ (The White Rose) ဆိုတဲ့ဂျာမန်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းစာအုပ်လေး တအုပ်နဲ့နောက်တအုပ်က (The Stalingrad) ဆိုတဲ့ ရုရှားလူမျိုးတွေ ရက်ရက်စက်စက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သမိုင်းစာအုပ်ပါ၊
ဟစ်တလာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့မောင်နှမ တတွေထဲကမသေပဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဖြူအဖွဲ့ဝင် တ ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရှိုး (Inge School) လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က ပြန်ရေးထားတဲ့ (The White Rose) စာအုပ်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်၊ ခုရက်တွေမှာ ကိုယ်ယုံယုံကြည်ကြည် ကိုး ကွယ်လာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေ၊လူတွေကိုပုံကန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်တစား ရှာ ကြည့် နေခဲ့ရင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ (စစ်တပ်က ပုန်ကန်မှုတွေကို ကျနော်တို့ ကြားချင်နေလို့ထင်ပါရဲ့) ဟစ်တလာကို အရူးအမူးကိုးကွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဟစ်တလာနဲ့ နာဇီပါတီရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကိုသိလာပြီး၊ ပြတ်ပြတ်သားသားဆန်ကျင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့၊
ဟစ်တလာလူငယ်တပ်ဖွဲ့က ကျောင်းသား၊ သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပါ၊ သူတို့ကို “နှင်းဆီဖြူ” အုပ်စုလို့သိကြပါတယ်၊ သမိုင်းမှာ ဟစ်တလာကြောက်တဲ့၊ မကြည့်ချင်လောက် အောင်မုန်းတဲ့ ပန်းပွင့်တခုရှိတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီ လူငယ်တွေကြောင့်ပါလားလို့ သဘောပေါက် လိုက်မိတယ်၊ တကယ်လို့ ဖတ်ဘူးပြီးသားစာအုပ်တအုပ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့စာမျက်နှာ တွေကိုကျော်ချလိုက်ပါ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖတ်ခွင့်မကြုံတဲ့ လူတွေအားလုံးအတွက် အတွေးလေး တခုလောက်ကျနော်တို့မျှကြည့်ချင်ပါတယ်၊
“ကျုပ်တို့အသံတွေက ငြိမ်သက်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျုပ်တို့က ခင်ဗျားတို့အတွက်တော့ မနားတမ်းပြန်ဝဲနေမဲ့လိပ်ပြာဆိုးတွေပါ၊ နှင်းဆီဖြူတွေက ခင်ဗျားတို့ကိုငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ဘ၀ တွေထဲမှာထားရစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး” ဂျာမဏီနိုင်ငံမြူးနစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပင်မ ခန်းမဆောင်ထဲက စတုရမ်းပုံစံဒီဇိုင်အဆောက်အဦတခုဟာဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတချို့နဲ့ဒဿနိကပါမောက္ခ တယောက်ကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ သင်္ကေတတခုလို့လူတိုင်းလေးမြတ်စွာနားလည်ခဲ့ကြတယ်၊ သူတို့ခြောက်ယောက်ကို ဟစ်တလာရဲ့ဂက်စတာဘိုတွေက ဖမ်းဆီးပြီးခေါင်းဖြတ်သတ် ခဲ့ကြ တယ်၊ ဟစ်တလာမကြည့်ချင်လောက်အောင်မုန်းတဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေကိုသူတို့ကဖန်ဆင်းခဲ့ တယ်၊ အမေရိကနဲ့တခြားနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေ၊ (အထူးသဖြင့် တက္ကဆပ်တက္ကသိုလ်)၊ တေးဂီတအဖွဲ့တွေမှာ “နှင်းဆီဖြူ လူ့အဖွဲ့အစည်း” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပါ၊ ဂျာမဏီရဲ့သူရဲကောင်းများလို့ လေးမြတ်ခံရတဲ့ သူတို့အတွက်တက္ကသိုလ် တွေမှာ ထောင်ချီပြီးဝေတဲ့နှင်းဆီဖြူ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ “ငါတို့ဟာငြိမ်သက်နေမှာမဟုတ်” စာ တန်းပါတဲ့တီရှပ်တွေကိုဝတ်ပြီးလှုပ်ရှား နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု တွေဆီထိပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်၊ နာဇီဂျာမဏီစစ်ရှုံးတာလူတိုင်းသိပေမဲ့ ဟစ်တလာကို ဂျာမန်လူထုကလည်းမထောက်ခံခဲ့ဘူး၊ ဟစ်တလာရဲ့လူငယ်တပ်တွေကအစ ပုန်ကန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့ သမိုင်းတွေက နည်းပါးခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုင်း
“ကျနော်တို့မိတ်ဆွေအဖြစ် လာခဲ့တာပါ၊ ခင်ဗျားတို့ကို စော်ကားဖို့မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ဟစ်တလာရဲ့စကားကို ဂျာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကအစ
မယုံကြတော့ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့၊ ဟစ်တလာလူငယ်တပ်က ကျောင်းသားတွေက သူတို့စဉ်းစားမိသလောက်
ဆန့်ကျင်အာခံဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်၊ ဟစ်တလာသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ပိုးလစ်ရှ် ဂျူးတွေ (Polish Jews) ကိုဖွက်ပေး၊ အန္တရာယ်ကလွတ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြနဲ့၊ ၁၉၄၀ ကာလတွေဆီကိုပြန်သွားကြည့်မိတယ်၊
နှင်းတွေ အေးစက်သိပ်သည်းစွာ၊ ဖွေးဖွေးစွတ်ကျနေသည့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ် . ၁၉၄၀ ကာလများ၊ ဆိုရှယ်လစ်စစ်ချီကြွေးကြော်သံတွေ၊ မာကြောပြတ်သားမှုတွေနှင့် စူးရှပြောင်လက်နေသော မျက်လုံးများထဲမှာ ဂျာမဏီပြည်ကိုမိုးကောင်းကင်ထိ
ဆွဲတင်ပစ်ရမယ်ဆိုသော မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ပါသည့်ရင်ခုန်သံတွေ၊ လူတိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှိနေစေရမယ်၊ အစာရေဆာပြည့်စုံနေစေရမယ်၊ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကမ္ဘာလောကကြီးကမြင်ကြရမှာဖြစ်တယ် ဆိုသည့် ဟစ်တလာ. မိန့်ခွန်းတွေကြားမှာ လူတွေတက်ကြွရဲရင့်နေကြသည်၊ အသက် (၁၀) နှစ်ကနေ (၁၄) နှစ်အထိတအုပ်စု၊ အသက် (၁၅) နှစ်ကနေ (၂၀) ကျော်သူတွေအတွက်တစု၊ ဟစ်တလာလူငယ်တပ်ဖွဲ့တွေ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်တွေဆီမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ၊ စာရင်းပေးပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာ အေးခဲနေသည့်လေထုကို မှုတ်ထုတ်ရင်းသိချင်းဆိုနေကြ သည်၊ နှလုံးသားကကောင်းကင်ဆီမှာ၊ စိတ်ကူးဆံနွယ်စတွေက သုခဘုံဆီမှာချည်နှောင်ထား ကြသည်ဟုထင်မှတ်မှားနေကြသည်၊-- ကမ္ဘာမှာဘယ်လူမျိုးမှ ဂျာမန်ပြည်သူတွေလောက် မမြင့်မြတ်ဆိုသည့် ဆိုရှယ်လစ်အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တယောက်က သူတို့နိုင်ငံကိုကြေကွဲမှု.အစွန်းဆီတွန်းချပစ်တော့မည်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်ခဲ့ကြ၊
“ကျနော်ကတော့သံသယတွေကြီးလာတာအမှန်ပဲ၊ ဒီ--ဟစ်တလာဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်က အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ပြောသာနေတာ၊ သူလုပ်နေတာတွေက စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ် မှုတွေကို တစထက်တစတိုးမြင့်လာတာရယ်၊ စစ်တန်းလျားတွေသာဆောက်နေတာပဲတွေ့ နေရတယ်၊ တိုင်းပြည်စည်းပွားရေးကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေ တခုမှမတွေ့ရ ဘူး”ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဘယ်လောက်ခက်ခဲမလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊
တခါမှအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေ နာဇီပါတီအာဏာရလာမှပဲ တသွေးတ သံတမိန့်ကိုကြုံခဲ့ရတော့တယ်၊
ဟစ်တလာရဲ့(Third Reich) ဥပဒေအရ၊ သူ့ကိုဟာသလုပ်ပျက်လုံးထုတ်တဲ့ ကောင်တွေကို သုတ်သင်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာဆိုတော့ ဂျာမန်ပညာတတ် ၅၀၀၀ ကျော်လောက်သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရတယ်၊ တိုင်းပြည်အာဏာကို ဟစ်တလာရဲ့လက်ထဲအပ်လိုက်ပြီးကတည်းက တိတ်တခိုး ဝေဖန်သံတွေ၊ မနှစ်မြို့သံတွေ၊ စစ်ပွဲတွေကြားမှာအတွေ့အကြုံများစွာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပညာတတ် တွေကြားမှာဇောကြောမေးခွန်းထုတ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရင် ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာက သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကအစ ဟစ်တလာက ဖမ်းစားသိမ်းသွင်းနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဟစ်တလာက သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်း၊ ဂျာမဏီပြည်သူတွေအတွက်အနာဂတ်မှာ အလုပ်တွေကိုဖန်တီးပေးဖို့ အတွက်စက်ရုံတွေကို
ဆောက်လုပ်ပေးနေတာလို့ယုံကြည်နေခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဟန်ရှိုးလ်နဲ့မောင်နှမ (၃) ယောက်လုံးက သူတို့အဖေ ရောဘတ်ရှိုးလ်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို “ဟာ အဖေကလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ် တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးက ကျနော်တို့ကိုရဲရင့်လှပတဲ့ အနာ ဂတ်ဆီ ကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ၊ ဒီစက်ရုံတွေဆောက်လိုက်တော့ လူတွေအ လုပ်ပိုရတာပေါ့”လို့ပြန်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးဟစ်တလာရဲ့လူငယ်အဖွဲ့ တွေ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်တွေဆီတက်တက်ကြွကြွဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ လူငယ် အဖွဲ့တွေဆီက လက်ရွေးစဉ်ကျောင်းသားတွေကို နာဇီပါတီ ကေဒါတွေအဖြစ် ဟစ်တလာက ချီးမြောက်လေ့ရှိတော့၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ ဂက်စတာဘိုအုပ်စုတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမဲ့နေ့ရက် တွေကိုစောင့်စားခဲ့ကြပါတယ်၊
၁၉၄၂ ဂျွန်လ (၂၂) ရက်မှာ ဟစ်တလာနဲ့ သူ့ရဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေကဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ကိုဝင် ရောက်ကျူးကျော်တိုက် ခိုက်တယ်၊ (၁) စတာလင်ဂရက်ဆိုတာ အဲ့ဒီတုံးကစက်မှု မြို့တော်တခုဆီကို အလုံးအရင်းနဲ့ချီတက်နေတဲ့ကာလ၊ ကက်စပီယံပင်လယ်နဲ့ ရုရှားတွေ အတွက်အရေးကြီးတဲ့လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၊ ရေနံတွင်းတွေကြွယ်ဝ တဲ့နေရာ၊ (၂) တပြိုင်တည်းမှာပဲ အဲ့ဒီဒေသကလူတွေစတာလင်အပေါ်မှာ ပျင်းရိစိတ်ပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောလဟာလလိုသတင်းကိုဟစ်တလာကကြားနေခဲ့တယ်၊ (၃) ဂျာမဏီ နယ်ချဲ့မှုနယ်နမိတ်မျဉ်းတွေလုံခြုံမှုအတွက် ရုရှားရဲ့နယ်မြေတချို့ကိုသိမ်းပိုက်မှဖြစ်မယ်၊ ဆိုတော့—ဒီအချက် (၃) ချက်ကို ကိုင်ပြီး ဂျာမဏီ က စတာလင်ဂရက်ကို သိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ပြဿနာက ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်“စတာလင်” ဆိုတဲ့နာမည်ဘာကြောင့် ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ဟစ်တလာအပါအ၀င်၊ ဂျာမဏီက ဗိုလ်ချုပ်တွေ
သိပုံမရဘူး၊ တကယ်တမ်း စတာလင် ရဲ့နာမည်အရင်းက Iosif Vissarionovich Dzhugashvili သူ့ရဲ့သံမဏီလိုမာကျောတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်၊ သံမဏိ (စတာလင်) လို့ဆိုဗီယက်တွေက ဂုဏ်ပြုပြီးခေါ်ခဲ့ကြသလို စတာလင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း နှစ်နှစ်ကြိုက်ကြိုက်သုံးစွဲခဲ့တယ်၊ စတာလင်က၊ ဟစ်တလာ ရဲ့တချက်ခုတ်၊ (၃) ချက်ပြတ်အကြံကိုသိတယ်၊
ဒါကြောင့်လည်း စစ်ပွဲမစခင်ကတည်းက ဂျာမန်တွေကြိုက်မဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအကုန်ဟာကွက်မရှိအောင်ပြင်ဆင်တယ်၊ သူကလည်း စစ်ပွဲကိုနိုင်အောင်ခုခံနိုင်ခဲ့ရင် သူ့ကိုပျင်းနေတဲ့သူတွေကို သူဘာလည်းဆိုတာ တုန်လှုပ်သွားအောင် ပြသချင်ပုံရတယ်၊
စတာလင်ဂရက်မှာနေတဲ့ကလေးတွေ၊ မိန်းမတွေကအစ၊ မြို့ကိုထွက်ပြေးသွားခွင့်မပေးခဲ့ဘူး၊
အားလုံးအနည်းဆုံးရိုင်ဖယ်သေနတ်နဲ့ပြန်ပစ်ဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းထားတယ်၊ မြို့ကိုမကျဆုံးဖို့အတွက် အသေခံကာကွယ်ရမယ်လို့အမိန့်ပေးထားခဲ့တယ်၊မြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူတွေကို သစ္စာဖောက်ဆိုပြီးပစ်သတ်ခိုင်းတယ်၊
ဒါကြောင့်လည်း သမိုင်းမှာ ခြောက်လအတွင်းလူပေါင်း တသန်းခွဲသေကြေခဲ့တဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံးစစ်ပွဲတခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့၊ (စတာလင်ဂရက်တိုက်ပွဲက ၁၉၄၂ သြဂတ်လကနေ ၁၉၄၃ ဖေဖေါ်ဝါရီလအထိဖြစ်ခဲ့တယ်)
ဂျာမန်တွေ၊ ဆိုဗီယက်တွေရဲ့ ထောင်ခြောက်အောက်မှာ အလူးအလဲခံလိုက်ရတော့တယ်၊ မြို့တခုလုံးရဲ့၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ဂျာမန်တွေပက်ပက်စက်စက်ဗုံးကြဲတာကြောင့် ရစရာမရှိတော့လောက်အောင် ပျက်စီးသွားပေမဲ့၊ စတာလင်က ရုရှားရဲ့အအေးစက်ဆုံး
ဆောင်းရက်တွေကိုစောင့်တယ်၊ မြို့ထဲမှာ ဂျာမန်တပ်တွေကျွံဝင်လာအောင်မျှားခေါ်တယ်၊ နောက်တော့—ဆောင်းမုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေး၊
(Operation Winter Strom)၊ ယူရေးနတ်(စ်)စစ်ဆင်ရေးနဲ့ မာန်နတ်စစ်ဆင်ရေး (Operation Satan) တွေကို ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တယ်၊ အစာရေဆာဖြတ်တောက်ခံရမှု၊ ရာသီဥတုပြင်းထန်မှုတွေနဲ့အတူ ကျနော်တို့ဂျာမန်တွေ ရောဂါတွေရ၊ ရက်စက်တဲ့ခံစစ်တွေ
အောက်မှာတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွကုန်ကြတယ်၊ ဆိုဗီယက်တပ်တွေနဲ့ဂျာမန်တွေကွာခြားမှုက၊ စတာလင်ဟာသူရဲ့စစ်တပ်ကို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရှင်သန်နေစေမဲ့ ၀ါဒ ဖြန့်စာတွေကိုဆက်တိုက်ဖန်တီးခဲ့တယ်၊
သူရဲကောင်းတွေအကြောင်းကို နောက်လူတွေလေးစားပြီး သူတို့လိုလမ်းကြောင်းမှာ လျောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်၊ အားပေးမြောက်စားတဲ့ အစီအစဉ်အရပ်ကို နီကီတာခရူးရှက်ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်ခဲ့တယ်၊
အဲ့ဒီတုံးက နှင်းဆီဖြူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဂျာမန်ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက၊ ရုရှားနဲ့တိုက်နေတဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေဆီကို ဆေးမှူးတွေအဖြစ်
၃ လသွားပြီးတာဝန်ထမ်းရတယ်၊ သူတို့တတွေစစ်ရဲ့အနိဌာရုံတွေကို သဘောပေါက်သွားသလို၊ ဂျာမဏိဟာစစ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာသိနေတယ်၊ တပြိုင်နက်ဟစ်တလာဟာသူ့ရဲ့ပါဝါအတွက်လူတွေအားလုံးကိုရင်းပစ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်၊ အပြန်မှာသူတို့ရေးသားဖြန့်ဝေတဲ့လက်ကမ်းစာစောင်တွေက သိတ်အားပါပြီးလူထုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ချတိုက်ပွဲဝင်ဖို့နိုးဆော်ခဲ့ကြတယ်၊
“အဆိုးဆုံးကတော့ ကျနော်တို့ကို နိုင်ငံခြားကလာတဲ့တေးဂီတတွေ နားမထောင်ရဘူး၊ ဂျာမန် တွေရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုလောက်ဘယ်အရာမှ မမြင့်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ အရာရှိတွေပဲ၊ ရုရှား သီချင်းတွေဆိုပိုလို့ဝေးရော့ပေါ့၊ ဟစ်တလာအမုန်းဆုံး လူမျိုးက ဂျူးတွေနဲ့ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ်ပြီး၊ အမုန်းဆုံးဘာသာဗေကိုပြပါဆိုရင်ရုရှားဘာသာစကား ကထိပ်ကပါတာပေါ့၊ ပိုထူးဆန်းတာက ကျနော်တို့အရင်ကတည်းက နှစ်နှစ်သက်သက်ကိုင်ဆွဲနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့အလံ တွေကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်မပေးတော့တာပဲ၊ သူတို့ဝါဒဖြန့်မှုတွေသာနားထောင်ရမယ်၊ သူတို့ခိုင်းတဲ့ အရာ ကလွဲလို့အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့၊ တရက်ဗျာ(၁၂)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတယောက်ကသူနှစ်သက်တဲ့အလံလေး၊ ကိုင်ပြီးသီချင်းဆိုနေတာကို ဂျာမန်စစ် ဗိုလ်တယောက်က အတင်းလွှင့်ပစ်ခိုင်းတယ်၊ သီချင်းဆိုတာကိုလည်းရပ်ခိုင်းတယ်၊ ကောင် လေးက နားမထောင်တဲ့အခါ၊ စစ်ဗိုလ်က ရိုက်နှက်မလို့ လျောက်လာတာကို ကျနော်မြင်တော့ ပြေးသွားပြီး အဲ့ဒီဗိုလ်ကို ဖြတ်ထိုးပစ်လိုက်တယ်၊ အဲ့ဒီနေ့က ဟစ်တလာလူငယ်အဖွဲ့နဲ့ ကျနော် နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းပြတ်တဲ့နေ့ပဲ၊”
စစ်ရဲ့အနိဌာရုံကိုသိသွားတဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ၊ ဟစ်တလာရဲ့ရူးသွပ်နေတဲ့ ဆန္ဒ ကိုသိသွားတဲ့ ဆေးမှူးတွေ၊
ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေကပြန်လာလာချင်း ၁၉၄၂ အလည်လောက်ကတည်းက လက်ကမ်း စာစောင်တွေစတင်ရေးသားတော့တယ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဟန်ရှိုးက ရေးသားပြီး၊ သူငယ်ချင်းတွေအတူ ညီမဖြစ်တဲ့ဇီဝဗေကျောင်းသူ ဆိုဖီရှိုးက လိုက်ပြီးဖြန့်ဝေတယ်၊ သူတို့ရဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေထဲမှာ စိတ်ဓာတ်ဝိညည်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ အားပြင်းထန်တဲ့အယူ အဆတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတယ်၊ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးထုတ်တဲ့လက်ကမ်းစာစောင် မှာ
“ အသူတရာနက်တဲ့ချောက်ထဲကနေ သူဟာထင်ထင်ရှားရှား မြင့်တက်လာပေမဲ့
သံမဏိစိတ်ဆန္ဒတွေ ကောက်ကျစ်မှုတွေ နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့တခြမ်းလောက်ကိုသိမ်းပိုက် ထားနိုင် ခဲ့ပေမဲ့၊ သေချာတာတခုက အဲဒီ-ချောက်ထဲကိုပဲသူပြန်သွားရမှာပါ၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မာန တွေနဲ့ သူကခုခံနေပေမဲ့၊ ထိတ်လန့်စိတ်ပျက်ကြောက်မက်ဘွယ်တွေက သူ့ကိုဝါးမျိုသွားပြီးပပြီ၊ သူနဲ့အတူရပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပျက်စီးကုန်ကြတော့မှာပါ။
မျှော်လင့်ချက် ဆိုတဲ့အဆုံးသတ်လက်ကမ်းစာစောင်ထဲမှာတော့ “ အမှောင်ထဲမှာ လူကောင်း တွေကိုငါတို့ရှာခဲ့တယ်၊ အိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်တဲ့ ငြိမ်သက်မှုတွေထဲမှာလွတ်မြောက်မှု ရဲ့ တောက်ပ၀င်းလက်နေတဲ့စကားလုံးတွေကို ခပ်တိုးတိုးရေရွတ် စောင့်မျှော်နေမိတယ်။
မြူးနစ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟန်ရှိုးဟာ နာဇီပါတီနဲ့ ဟစ်တလာဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ဗဟိုဖြစ်လာတယ်၊ သူ့နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေးအတွေး အခေါ်တွေအားဖြည့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဒဿနိကပါမောက္ခ (Kurt Kubre)
“မှတ်မှတ်ရရ၊၁၉၄၃ ရဲ့ဆောင်းရာသီမှာပေါ့၊ ဂျာမဏီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ကျောင်းသူတွေသူတို့အိပ်မက်တွေဆွဲဆုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်ကြ တယ်၊ ဘဗီရီယာခရိုင်တာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်က မြူးနစ်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာပြီး မိန့်ခွန်းပေး တယ် “မိန်းမတွေဟာ၊ စာသင်ကြားနေမှုအပေါ်မှာ အချိန်ဖြုန်းနေမဲ့အစား၊ ဂျာမဏီ တပ်မတော်အတွက် နောက်မျိုးဆက်ကလေးတွေကိုမွေးပေးသင့်တယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် အပေါ်ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် သူ့နားမှာကိုယ်ရံတော်အဖြစ်နေဖို့ စီစဉ် ပေးမယ်” လို့တိတိလင်းလင်းပြောလာတယ်၊၊ ကျောင်းသူတွေက သူရဲ့မိန့်ခွန်းကိုဆက်နားမ ထောင် တော့ပဲအခန်းအပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဂက်စတာဘိုထောက်လှမ်းရေးတွေက ၀ိုင်းဖမ်းလိုက်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ နှင်းဆီဖြူလူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ကျောင်းတွေထဲမှာ ကောင်းကောင်းအမြစ်တွယ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းသူတို့သဘောပေါက်နေကြတယ်၊ကျောင်းသူ တွေအားလုံးနီးပါး အာဏာဖီဆန်ဖို့ကြိုးစားတော့ ဂက်စတာဘိုတွေနဲ့ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်ထိပ် တိုက်တိုးမိကြတော့တယ်၊ ကျောင်းသူ (၈၀) နီးပါးအဖမ်းခံရတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြူးနစ် တက္ကသိုလ်ဟာ ဟစ်တလာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ နေရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းကသက်သေခံ လိမ့်မယ်၊
ဂျာမန်တွေဟစ်တလာ သဘောထားကိုရိပ်စားမိသွားပြီ၊ နာဇီဂျာမဏီကိုအဆုံးသတ်ဖို့ လှုပ်ရှား မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာကြတော့သည်၊ နှင်းဆီဖြူကျောင်းသားတွေ သမိုင်းမှာနာမည်ကြီး ကျန်ရစ်စေမည့် စာစောင်တွေပလူပျံလာသည်၊ စာစောင်နံပါတ်နှစ်မှာ ဟစ်တလာရဲ့ယုတ်မာ ရက်စက်မှုတွေကို ပျင်းရိဘွယ်မသိကျိုးကျွံ ပြုနေတဲ့ပြည်သူတွေကို နှိုးဆော်လိုက်သလို၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် လာအိုဇူ (Lao_Tzu) ၏ “နိုင်ငံတော်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ကြိုးစား နေသူဟာ နိုင်ငံတော်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်မဲ့သူဖြစ်တယ်၊ တိုင်းပြည်ကိုသူရဲ့အာဏာအောက် မှာ သွပ်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့၊ သူဟာဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်”ဆိုသောအဆိုအမိန့်များကိုထည့်ထား တတ်သည်၊ မြူးနစ်တက္ကသိုလ်ပေါ်တံခါးပေါက်ဝတွေဆီက စာရွက်တွေကိုကြဲချလိုက်ပြီး မကြာ ခင်မှာ ကျောင်းသားယောင်ဆောင်ထားသော ဂျာမန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့အရာရှိတွေ ရောက်လာပြီး၊ ဆိုဖီရှိုးအပါအ၀င် နှင်းဆီဖြူကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတော့ သည်၊
၁၉၄၃ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၂) ရက်မှာတော့ဂက်စတာဘိုတွေ ရက်ရက်စက်စက်နှိပ် စက်စစ်ကြောမှု ကိုခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် နှင်းဆီဖြူလူငယ်တွေကို ပြည်သူ့တရားရုံးမှာ ခုံရုံးတင်ပြီး ခေါင်းဖြတ် စက်ဖြင့်သတ်ဖြတ်ပစ်ရန် စီရင်ချက်ချခဲ့သည်၊ ဆိုဖီရှိုးကဒဏ်ရာတွေ အပြည့်အသိပ်နှင့် အေး အေးဆေးဆေးပြုံးရင်း တရားသူကြီးအပါအ၀င်၊ ဂျာမန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို မေးခွန်း တခုမေးလိုက်သံကို တရားရုံးထဲကပြည်သူတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနေရသည်၊ “ နေပါအုံး၊ ရှင်တို့ကဘာလို့ ဒါ လောက်သူရဲဘောကြောင်နေရတာလဲ၊ ဂျာမဏီစစ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာကို ပြည်သူကိုအသိပေးလိုက်တော့လေ” တဲ့ ….
နှင်းဆီဖြူကျောင်းသားတွေ တကယ်တမ်းထုတ်ခဲ့တာ လက်ကမ်းစာစောင်(၆) စောင်ပဲ ရှိပေမဲ့ အဲ့ဒီ စာစောင်တွေထဲက စာသားတွေ၊ ပြည်သူကိုတပ်လှန့်သံတွေဟာ အင်အားပြင်းထန်ခဲ့ပါ တယ်၊ သူတို့သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့စာတွေကိုဂျာမဏီကနေ အင်္ဂလန်ဆီခိုးထုတ်၊မဟာ မိတ်တပ်တွေကလေယာဉ်နဲ့ ဂျာမဏီပြည်ကမြို့တော်တွေဆီ “မြူးနစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များ.ကြေငြာစာတန်း”အဖြစ်ကျဲချခဲ့ပါတယ်၊ ဟစ်တလာကို ဂျာမန်ပြည်သူတွေကအစလက်မခံ ဘူး ဆိုတာကမ္ဘာကိုပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တခုလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြူးနစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပင်မအဆောက်အဦကို ရောက်ရင်၊ သူတို့ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုထားတဲ့ အရာ တွေ၊ “ ငါတို့ဟာငြိမ်သက်နေမှာမဟုတ်” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးဆီပြန့်နှံ့သွားတဲ့စာတန်းတွေ၊ ဂီတနဲ့အသက်ဝင်လိပ်ပြာတွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ နှင်းဆီဖြူတွေက ကမ္ဘာကြီးကိုတိတိကျကျ သတင်းပို့နေခဲ့ပါတယ်၊ “သူရဲကောင်းတွေဆိုတာအမြဲနုပျိုနေတဲ့ နှင်းဆီဖြူတွေပါဗျာ”တဲ့
စာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် ……. Inge School ရေးတဲ့ The White Rose ကိုဖတ်ပါ
၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားဘာသာရုပ်ရှင်ကားဆုရတဲ့ Sophie School The Final Days နဲ့ပေါင်းပြီးခံစားလိုက်ရင်တော့ ပိုအရသာရှိမယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Posted by ရွှေဥသြ at 23:32
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ (ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်) အခဏ...
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ (ဂျူးလ်ိယက်ဖူးချစ်) အခဏ...
ခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့သော ပြည်သူ၊ ခွေးနှင့်တူသော စစ်အုပ...
လူထုအတွက် လူထုဖက်က လူထုဒေါ်အမာ
နအဖရဲ့ ရှေ့ခြေလှမ်းကို ရိုက်ချိုးဖို့ပြင်ကြစို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေညာချက်အား ရုပ်ရှင်လောကသားမျ...